Mg Thant: ပျားတုပ်တဲ့ ဒီမနက်
Candy December 19, 2011 at 3:57 PM
အင်း.. ကန်ဒီ့အကောင့် တခုခုဖြစ်လို့ကတော့ အားလုံးပြောင်ပြီပဲ.. အားလုံးကို အကောင့်တစ်ခုထဲနဲ့သုံးတာဆိုတော့..
back up လုပ်ဦးမှ :D
Crystal December 19, 2011 at 4:16 PM
သတိထားစရာလေးပဲ မှတ်သွားအုံးမှ :)
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! December 19, 2011 at 5:08 PM
jasmine(တောင်ကြီး) December 19, 2011 at 5:31 PM
ဘိုဖြူ December 19, 2011 at 5:33 PM
မြသွေးနီ December 19, 2011 at 5:46 PM
မနက်ကပဲ ရုံးမေးလ်ကို ၀င်မရလို့ မျက်လုံးပြူးရသေးတယ်။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) December 20, 2011 at 2:07 AM
ခုနောက်ပိုင်းတော့ ဖုန်းထဲကို မက်ဆေ့ရောက်လာမှ ဖွင့်လို့ရအောင် လုပ်ထားလိုက်တယ်
ဒါဆို သူများတွေ ဟက်ဖို့ တော်တော်နဲ့ မလွယ်တော့ဘူး ထင်တာဘဲလေ။ အရေးကြီးတဲ့ မေလ်းတွေကို အဲလိုလုပ်ထားရင် ပိုကောင်းတာပေါ့. ဘလော့ဝင်တဲ့ မေလ်းတွေက အစပေါ့နော်
ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်ကနေ ပြန်ဖွင့်မယ်ဆိ်ုရင်တော့ သေပြီဆြာပဲထင်တယ်။ ဂူဂဲက မြန်မာဖုန်းကိုတော့ မက့်ဆေ့ပို့လို့ရမယ်မထင်ဘူး နော်.
Nyi Linn Thit December 23, 2011 at 8:46 PM
ကျနော့်ပို့စ်နဲ့ တကယ့်ကို တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ပါပဲလား၊ တော်သေးတာပေါ့ဗျာ၊ ပြန်ဖွင့်လို့ ရသွားလို့..၊ ဂူးဂဲလ်က ဘာများ ကြောင်သွားတာလည်း မသိဘူးနော်..၊ ဘာမှလည်း မလုပ်ရသေးဘဲနဲ့ ဆိုတော့..၊ အခုနောက်ပိုင်းက လက်တဖျစ်အတွင်းမှာ အားလုံး ဆုံးရှုံးသွား နိုင်တော့ back up လုပ်ဖို့ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိပေးနေရ တော့တယ်ဗျာ..။
Iora December 24, 2011 at 3:13 AM
ကျမလည်း အဲဒီအတုိုင်း ကိုညီလင်းသစ်ပို့ စ်မတက်ခင်နေ့ မှာဖြစ်ခဲ့လို့ ပို့ စ်လေးတခုတောင်တင်ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ကညလသသတိပေးပို့ စ်လေးကြောင့် ခုတော့ ဘက်ကပ်လုပ်ထားပါတယ်။